जाडो मौषममा किन हाम्रो ओठ फुट्छ ? जान्नुहोस, - Desh Post
जाडो मौषममा किन हाम्रो ओठ फुट्छ ? जान्नुहोस,
२९ कार्तिक २०७७, शनिबार ०७:५४ मा प्रकाशित (10 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
देशपाेष्ट/काठमाण्डाैं । सामान्यतयाः जाडोको मौसम सुरु भएसँगै ओठ फुट्ने समस्या पनि शुरु हुन्छ । जाडोको समयमा हावा सुख्खा हुने र यसको स्पर्श छालामा पर्दा छाला पनि सुख्खा हुने गर्छ ।